को कोमी को राजधानी। Sysola को बैंकहरू मा कोमी राजधानी
यात्रा, दिशा निर्देशन
उत्तरी रूस, को यूराल हिमालहरूको पश्चिम, कोमी गणतन्त्र स्थित। पूर्व देखि पश्चिम र दक्षिण बाट उत्तर बारे एक हजार किलोमिटर यो रोचक किनारा थाह गर्न चाहने एक हटाउन हुनेछ। किनारा Sysola (नदी) मा कोमी गणतन्त्र को राजधानी बसे र यसको प्राचीन इतिहास गर्व छ।
क्याथरीन द्वितीय को उर्दी द्वारा
अपेक्षाकृत कठोर जलवायु जाँच को असमान किनारा गर्न नेतृत्व गरेको छ। जनसंख्याको सबैभन्दा यसको दक्षिणी भाग मा स्थित छ। Sysola मा नदी को confluence मा नदी Vychegda साइकेटिभकर - जो देखि कोमी को राजधानी उत्पत्ति, 16 औं शताब्दीमा गिर्जाघरको छेउछाउको चिहान Ust-Sysola उत्पत्ति।
1780 मा, रानी क्याथरीन द्वितीय भोलोग्डा Viceroyalty, Ust-Sysolskiy सहित उन्नाइस काउंटियों, समावेश जो गठन। तदनुसार, एक काउन्टी शहर परिवर्तन Ust-Sysola को गाउँमा भनिन्छ Ust-Sysolsk, तुरुन्तै कारण वरपरका बस्तियों गर्न हतियार र मास्टर योजना, शहर को विस्तार मुछिएको को आफ्नै कोट पायो गर्ने।
नदी Sysola मा शहर
बस शब्द साइकेटिभकर (- शहर "कार") को कोमी भाषा अनुवाद संग त। नदी Sysola ( "Syktyv") सँग सम्बन्धित नाम को पहिलो आधा।
नयाँ नाम हामी शहर स्थिति गर्न जिम्मेवारी को 150th वार्षिकोत्सव मनाइन्छ गर्दा, धेरै वर्ष पछि प्रतिस्थापन Ust-Sysolsk 1930 मा। 1930 मा, साइकेटिभकर कोमी (Zyrian) को स्वायत्त क्षेत्र को प्रशासनिक केन्द्र भएको छ।
नदीहरू र Sysola Vychegda नजिक - शहर धेरै सुविधाजनक छ। सबै पक्षलाई यो शहर क्षेत्र को 70 भन्दा बढी प्रतिशत ओगटेको छ, जो वन, घेरिएको छ। यो 152 वर्ग किलोमिटर छ। मास्को साइकेटिभकर देखि 1,400 किलोमिटर द्वारा विभाजित।
अर्को छ वर्ष लाग्यो, र डिसेम्बर 1936 मा नयाँ स्थिति साइकेटिभकर प्राप्त - यो कोमी गणतन्त्र को राजधानी।
शहर सक्रिय उद्योग र शिक्षा क्षेत्र, जनसंख्या वृद्धि गर्न योगदान जो विकास गर्न थाले। 1989 गरेर, कोमी गणतन्त्र को राजधानी मा 2,40,000 भन्दा बढी मान्छे को जनसंख्या।
साइकेटिभकर मा, 40 ठूलो औद्योगिक बारेमा एक-तेस्रो जो सबै-संघ महत्त्व थिए उद्यम, त्यो समय थियो। काठ, मज्जा र कागज र काठको काम उद्योग को शेयर शहर उत्पादित सबै वस्तु उत्पादन को 60 भन्दा बढी प्रतिशत को हिसाब। काठ, काठ, प्लाईवुड, chipboard, कागज, गैर-बुना कपडे - को कोमी गणतन्त्र को राजधानी, सोभियत संघ को धेरै आपूर्ति यी सबै।
साइकेटिभकर मा 1932 मा राज्य शैक्षणिक संस्थान, जो विशेषज्ञहरु उत्तर अध्ययन गरिएको छ विज्ञान को सोभियत संघ एकेडेमी, त्यसपछि आधार र 1949 मा पहिले नै विज्ञान को एकेडेमी को कोमी शाखा भनिन्छ थियो जो खोलिएको थियो। साइकेटिभकर राज्य विश्वविद्यालय 1972 मा खोलिएको थियो।
पुरानो टाइमर कठोर जाडो महिनामा र एकदम छोटो गर्मी को महिना सम्झना। तथापि, ग्लोबल वार्मिंग र को जलवायु मा प्रभाव को कोमी को गणतन्त्र राजधानी। उहाँले नरम भयो।
निस्सन्देह, गंभीर frosts अझै पनि छैन रूस युरोपेली भाग को उत्तर-पूर्वी लागि असामान्य छन्। तथापि, तिनीहरूले त, लामो औसत मा, जाडो गंभीर frosts तीन हप्ता recruited भन्दा छ। को जाडो बाँकी albeit लामो, एक वर्षमा6महिना सम्म रहन्छ, अपेक्षाकृत थोरै छ।
वसन्त पनि मई मा, एउटै चिसो गर्न लामो समयसम्म छ असमान, गिर सक्छ हिउँ र चिसो विशेष, बासिन्दाहरू द्वारा छक्क पनि जुलाई छैनन्। हामी गिरावट महिना खातामा लिन भने, त्यसपछि गर्मी मा, त्यहाँ धेरै सानो समय शायद2महिना छ। कोमी पूंजी पनि एक अल्पकालीन गर्मी को छैन घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। औसत गर्मी तापमान - 17 डिग्री सेल्सियस।
साइकेटिभकर को जनसंख्या
, 60 भन्दा बढी प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या, वा कोमी कोमी-Zyrian मात्र लगभग 30 प्रतिशत गर्दा - आज, 2,40,000 मानिसहरू शहर कुल संख्या को जनसंख्या द्वारा रूसी प्रभुत्व छ।
तर, यो सधैं थियो। को 19 औं शताब्दीको अन्त्यमा जनसंख्याको बहुमत कोमी शामिल थिए। परिवर्तनहरू मुख्य रूप रूसी यस क्षेत्रमा राजनीतिक exiles पठाउने सुरु गर्दा 20 औं शताब्दीमा आए।
कोमी मानिसहरूका - एक Finno-Ugric मानिसहरूका। उहाँले कोमी को गणतन्त्र को आदिवासी मान्छे छ। 2010 को रूप मा, आफ्नो जनसंख्या एक सानो 202 भन्दा बढी हजार कोमी-Zyrian (कुल जनसंख्याको 23,7%) थियो। यस जातीय समूह र अन्य उदाहरण, मर्मान्स्क र Sverdlovsk क्षेत्रहरु, Nenets स्वायत्त जिल्ला को लागि, रूस को क्षेत्रहरु मा प्रतिनिधिहरु। तथापि, तिनीहरूले केही छन्। रूसी संघ भर कोमी-Zyrian को कुल रकम 228.000 मान्छे छ।
हुनत दुवै Finno-Ugric मानिसहरूका आबद्ध कोमी-Zyrian, को Permian Komis संग भ्रमित हुनु हुँदैन।
को पर्म क्षेत्रमा कोमी
माथिल्लो बेसिन मा। Kama, को यूराल मा, स्थित कोमी-पर्म जिल्ला - 2005 सम्म रूसी संघ को एक स्वतन्त्र विषय। त्यो त संग संयुक्त थियो , पर्म क्षेत्र एक पर्म परिणामस्वरूप।
को Permian कोमी जिल्ला राजधानी - Kudymkar शहर - विलय पछि प्रशासनिक केन्द्र Kudymkarsky क्षेत्र भयो। नदी Inva र Kuva - यो Kama को tributaries मा स्थित छ। यो पर्म 200 किलोमिटर देखि अलग।
शहरमा आधा भन्दा बढी जनसंख्या अप कोमी-Permian बनेको छ। रूस मा कुल कि राष्ट्रियता को बारेमा 1,25,000 मानिसहरूलाई घर हो।
ऐतिहासिक स्मारक साइकेटिभकर
कोमी पूंजी पर्यटकहरुका लागि रोचक स्थानहरूको कमी गनगन गर्न सक्दैन।
चर्च प्रभुको एस्केन्सन को शहर को प्राचीन र ऐतिहासिक साइटहरु बुझाउँछ। यो पनि एस्केन्सन चिहान को चर्च भनिन्छ। यो धनी व्यापारी Ust-Sysolsk को खर्च मा बनाइएको थियो Aleksey Sukhanov वर्ष 1820 मा 1811 देखि। यो मृतक को अन्त्येष्टि लागि चिहान मा बनाइएको थियो। अब, यो चिहान एक स्मारक जटिल erected थियो।
Sukhanov घरमा 200 भन्दा बढी वर्ष। यो केवल पुरानो ऐतिहासिक स्मारक को एक, तर पनि पहिलो ढुङ्गा अपार्टमेन्ट भवन छ। विद्यालय, पार्टी स्कूल: पछि, यो संस्थाहरू एक किसिम रखे। 2009 मा, पुनर्निर्माण पछि, संग्रहालय को निर्माण आई Kuratov खोलिएको थियो।
राष्ट्रिय ग्यालरी को Ust-Sysolsky धार्मिक स्कूल लागि 120 वर्ष पहिले निर्माण गरिएको अर्को ऐतिहासिक भवन, मा स्थित छ।
कम्पाउन्ड त्रिएक Stefano Ulyanovsk विहारको, Suvorov को घर, आगो टावर, व्यापारिक घर Kuzbozheva व्यापारीहरू पर्म को गिरजाघर स्टीफन - सबै शहर को ऐतिहासिक र वास्तुकला स्मारक हो।
अद्वितीय स्थान - weathering को खम्बा
यो साइकेटिभकर, कोमी राजधानी मा स्थित छ तर यो तिर मनोवृत्ति छ गरौं। हुनत, जहाँ हेलिकप्टर, रूस को सातौं आश्चर्य को भनिन्छ जो प्राप्त गर्न सबैभन्दा सुविधाजनक छ मात्र किनभने छ भने weathering को खम्बा।
तिनीहरूले कोमी गणतन्त्र, को Pechora-Ilych प्रकृति रिजर्व जहाँ स्थित छ को त्रिएकको-Pechersk जिल्ला छन्। दुई सय मिलियन वर्ष पहिले, बिस्तारै नष्ट हावा, वर्षा, सूर्य र हिउँ को प्रभाव अन्तर्गत हो कि उच्च पहाड थिए। एक कम पहाड-Manh नाइटो-ner मा ठोस-sericite quartzite स्लेट7स्तम्भहरू थिए। ती सबै 30 42 मा मीटर को एक विचित्र आकृति र उचाइ छ।
तिनीहरूले खगरिया को मान्छे को लागि उपासनाको वस्तु थिए किनभने Remnants खगरिया boobs भनिन्छ। धेरै दन्त्यकथा उनको घटना संग सम्बन्धित छन्। तिनीहरूलाई को एक मा, छ दिग्गज कुलको खगरिया, को यूराल पहाड पछि छोड्न खोजे जो मानिसहरू खेदे। को मूल मा पास मा भएको Pechora नदी, जब दिग्गज कुलको साथ समातिए छन्, तिनीहरूले तरिका जादूगर रोक लगाइएको र पत्थर स्तम्भहरु तिनीहरूलाई गरियो। त्यतिबेलादेखि कुलको खगरिया सबै shamans आफ्नो जादुई शक्तिहरु यस पवित्र पर्चा मा आकर्षित।
कि यो सत्य हो वा होइन। तर पहाड मानिस-Pupu-Ner, भ्रमण गरेका धेरै यात्री यो स्थान को असाधारण शक्ति कुरा। तर, प्राप्त छैन त्यसैले सरल छ। एउटा सानो खुट्टा वा हेलिकप्टरद्वारा छनौट। तर एक शानदार स्थान प्रयास लायक।
कोमी को तेल राजधानी
साइकेटिभकर प्रशासनिक केन्द्र साथै, कोमी गणतन्त्र यसको तथाकथित तेल राजधानी छ। यो जवान Usinsk, यो 1984 मा स्थापित भएको थियो देखि बस 30 वर्ष गर्ने गरियो।
पहिलो राम्रो 1960 मा भङ्ग भएको थियो काटिएका, जसमा तेल पाइन्छ। र चार वर्ष पछि त्यहाँ गहिरो ड्रिलिंग को पेट्रोलियम अन्वेषण यात्रा को लागि एक बन्दोबस्त को निर्माण भयो। केही वर्ष त्यहाँ पछि Komsomol निर्माण जो, बारी मा, चाँडै शहर भयो, राम्रो-संगठित बन्दोबस्त पहिले नै घोषणा गरेको थियो छ। 1999 मा Usinsk क्षेत्र को क्षेत्रहरू उत्पादन तेल को कुल मात्रा 200 मिलियन टन नाघ्यो।
आज Usinsk ठीकै भएको कोमी गणतन्त्र मा सबै भन्दा ठूलो तेल-उत्पादन क्षेत्र को केन्द्र भनिन्छ गर्न सकिन्छ। यहाँ प्रमुख तेल कम्पनीहरु, "आर.एन.-Severnaya Neft", "LUKOIL-कोमी" Usinskaya औद्योगिक कम्पनी "Nedra" र अरूलाई राखिनेछ।
2010 को जनगणना 47.000 मान्छे Usinsk बस्ने कि देखाए।
साइकेटिभकर को विरोधीहरूले
तपाईं पछिल्लो दस वर्ष मा कोमी गणतन्त्र को समाचार चिन्न भने, हामी देख्न कहिलेकाहीं त्यहाँ कोमी को राजधानी को नापसंद प्रज्वलित गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, Ukhta एक समय को शहर को मानार्थ "स्थिति" हुन दावी।
किन? यसको पक्षमा तर्क पनि अधिक उद्धृत। रूस मा केही विश्वविद्यालयहरु को एक, तेल र ग्याँस विशेषज्ञहरु उत्पादन जो - त्यहाँ यूराल राज्य प्राविधिक विश्वविद्यालय किनभने Ukhta, क्षेत्र को एक शैक्षिक केन्द्र हुन मानिन्छ। Ukhta पक्षमा भन्छन् र यातायात सुविधा: कुनै बन्दोबस्त कोमी वस्तु उनको संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।
तथापि, न प्रश्न सम्म भयो होला: "को कोमी गणतन्त्र को राजधानी छ के" - हामी सबै, "साइकेटिभकर" जिम्मेवार छन्।
"Kultushnaya" - लेक Baikal मा मनोरञ्जन केन्द्र
को Amur नदी मार्फत पुल: फोटो, लम्बाइ, निर्माण
Trakai महल - लिथुनियन् अगुवाहरू को पूर्व निवास
Nizhny Novgorod Kremlin: cathedrals, टावर, इतिहास
आइसल्याण्ड पर्यटन: यात्रा, पर्यटक आकर्षण, लोकप्रिय गन्तव्यहरू
Khakassia, पोखरी Shire। Khakassia: छुट्टी, ताल Shira
Kolhikum (Colchicum): बिरुवाहरु लागि रोपण र मायालु
लामो शब्दहरूको डर
अटलांटिक महासागर को जैविक संसारमा: सुविधा र विवरण
Astigmatism: उपचार कठिनाई को डिग्री मा निर्भर गर्दछ
"अन्डा बादल": पकाउने अन्डा लागि सिद्ध नुस्खा
के Amphioxus र शंख को आहार मा साधारण छ: तुलनात्मक विशेषताहरु
लम्बाइ बिना सुन्दर नङ!
Highchair "Babysitter41 मा": विधानसभा निर्देशन, समीक्षा
जनसंख्या Tver: गतिशीलता, नस्ल, रोजगारी
"Osmokot" - लामो-अभिनय मल। आवेदन, तस्बिर, समीक्षा, निर्देशन
ग्लाइकोलिक एसिड संग रासायनिक छीलने
कसरी टन रोमिङ जडान गर्न - सुझावहरू